वेदले भन्यो ‘ब्रह्माण्डमा ८४ लाख प्रजाति छन’, १२ लाख भेटियो बाँकी कसले खोज्ने ?
असार १७, २०७६ मध्य नेपाल संवाददाता
ब्रह्माण्ड शब्दको अर्थ हो ब्रह्मद्वारा बनाईएको सृष्टि, हाम्रो हिन्दू शास्त्रोमा ब्रह्म भगवानको उस रूपलाई भनिन्छ जो जगत, संसार र यस ब्रह्माण्डको रचियता हुन् । हाम्रो वेद र पुराणहरुमा ब्रह्माण्डको एकदमै ठूलो रहस्यको रुपमा पाइने गरिएको छ । हामीले आजसम्म जुन श्लोकहरु जानेका छौं यसबारे । ती श्लोकहरुको श्लोकहरु भने हामीले अझैसम्म पनि जान्न सकेका छैनौं ।
जसरी हरेक सफ्टवेयरको अलग कककड हुन्छ । त्यसैगरी उनीहरु कककड केवल निश्चित प्रककग्रामरले मात्रै पढ्न सक्छन् । त्यसैगरी संस्कृत श्लोकलाई केवल ब्रह्मज्ञानीहरुले मात्रै बुझ्न सक्छन् । यी ब्रह्म ज्ञानीहरुलाई ब्राह्मण भनिन्छ । आजको दिनमा ब्राह्मण शब्दले जाति विशेषलाई जनाउने गरेको छ । तर, यसले उल्लेखित ब्राह्मणले ब्रह्मज्ञानीलाई जनाउने गर्दछ । जो आफ्नो ज्ञानको गंगाबाट यो भूमिलाई पवित्र बनाउने गरेका थिए ।
पुरानो शरीरद्वारा नयाँ शरीर
आधुनिक विज्ञानले समेत हाम्रो वेद र शास्त्रहरुको विज्ञानलाई मान्न थालेका छन् । जसरी हाम्रा शास्त्रहरुमा भनिएको थियो कि मनुष्य जब मर्दछ भने उसले पुराना वस्त्रलाई त्यागेर नयाँ वस्त्र पहिराइदिनु पर्छ । उसैगरी जीवात्मा पनि आफ्नो पुरानो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीर पाउने गर्दछ । यस भनाइलाई विज्ञान समेत मान्न थालिसकेको छ । अणु परमाणु अलग अलग रूप लिन सक्छन् । विज्ञान चाहे जति सुकै उन्नत होस् । तर, कसैले पनि आजसम्म यो जान्न सकेको छैन कि जीवहरुको हृदयमा ऊर्जाको स्रककत के हो?
८४ लाख प्रजातीहरु
पद्म पुराणमा भनिएको छ कि धरतीमा ८४ लाख भिन्न भिन्न प्रकारको प्रजातीहरु ६ विभागमा बाँडिएको छ । जलज, स्थावर, कीरा, पन्छि, पशु र मानव । यी ६ विभागहरु हुन् । तर, के ८४ प्रजातिहरु केवल हाम्रो पृथ्वीमा नै छ ? के यो सम्भव छ? व्यावहारिक रूपले यो सम्भव छैन । आधुनिक विज्ञानको अनुसन्धानद्वारा यो पत्ता लगाइएको छ कि लगभग १२ लाख प्रजातीहरु नै यस धरतीमा रहन्छन् । यी प्रजातीहरु दिन प्रतिदिन विलुप्त हुँदै गइरहेका छन् ।
यदि यस्तो हो भने बाँकी ७२ लाख प्रजातिहरु कहाँ गयो त ?
यदि ८४ लाख प्रजातिहरु जसलाई ८४ लाख यककनी पनि भन्ने गरिन्छ । त्यो सत्य हो भने यो पनि सत्य हो कि यस ब्रहाण्डमा हामी एक्लै छैनौं हामी जस्तै अरु पनि ब्रह्माण्ड छ । ऋग्वेदमा जुन ८४ लाख यककनीको उल्लेख छ । जुन हामी सबै मानिसहरु सबै योनी पार गरेर आएको भन्ने उल्लेख छ ।
८४ लाख धरतीहरु
वास्तवमा ८४ लाख यककनीको अर्थ ८४ लाख धरतीहरु पनि हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । कककटी सूर्यलाई घूम्नेवाला एक करककड पृथ्वी पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । ब्रह्माण्डको आकार र उसको सीमा हाम्रो कल्पना भन्दा पनि बाहिर छ । यो हाम्रो कल्पना भन्दा पनि अधिक विशाल छ । आधुनिक विज्ञान अहिलेसम्म आफ्नो आकाशगंगाबाट बाहिर जान सकेका छैनौं । फेरि अनन्त ब्रह्माण्डमा के भइरहेको छ हामीलाई बसरी थाहा होस् ।
समानान्तर ब्रह्माण्डको बारेमा र पृथ्वीको बारेमा हामी सनातन धर्मशास्त्र योगवसिष्ठमा विभिन्न कुराहरु पाउन सक्छौं । त्यसमा माता सरस्वती माया नामको रानीलाई एकै ठाउँमा सुक्ष्म रूपले कैयौं ब्रह्माणहरुलाई देखाउँछिन् । जसमा उनी रानी आफ्ना पतिलाई हरेक ब्रह्माण्डको हर पृथ्वीमा अलग अलग रूपले देख्छिन् ।
वैज्ञानिकले पत्ता लगाए मानव जीवनको सम्भावना रहेको दुइ ग्रह
वैज्ञानिकले मानव जीवनको सम्भावना भएको दुई ग्रह पत्ता लगाएका छन् । अहिले पत्ता लगाइएको ग्रह पृथ्वीकै आकारका छन् । साथै ती ग्रह अर्बौं वर्ष पुराना पनि हुन् । जसकारण यसले मानव जीवनको सम्भावना हुनसक्ने बताइएको छ । अहिले आफ्नै तारालाई परिक्रमा गरिरहेका ती दुई ग्रहको घुम्ने प्रणाली हेर्दा उक्त ग्रहमा जल प्रवाह र बसोवासका लागि उचित तापक्रम हुनसक्ने बताइएको छ । यी दुई ग्रह टीगार्डेन्स तारालाई परिक्रमा गरिरहेका छन् ।
तारा पृथ्वीभन्दा १२ प्रकाश वर्ष टाढा छ । १२ प्रकाश वर्षमा सात सय ५ खर्ब ४० अर्ब माइल टाढा हो । अन्तरिक्षको हिसाबमा यो धेरै टाढाको दूरी भने होइन । उक्त ग्रह र तारामा गरिएको अध्ययनमा टीगार्डेन्स तारा स्थिर देखिएको छ । यसबाट ठूलो सौर्य ताप वा कुनै हिंस्रक गतिविधि पनि नहुने पाइएको छ ।–सौजन्य
मगलवार, असार १७, २०७६, ०४:०७:००
ग्राहक आफैले अनलाईन मार्फत विद्युत मिटर रिडिङ्ग गर्न पाउने
निषेधाज्ञा हटाइयो, पिसिआर टेष्ट गर्ने किट छैन् अस्पतालमा
कोरोनाको असर फेसबुकमा पनि, घटाउँदैछ भिडियो क्वालिटी
विश्वको आयु ४१ वर्ष बाँकी !
कार्तिक १२, २०७६ मध्य नेपाल संवाददाता
क्यान पर्साको अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा दीपक साह निर्विरोध
भदौ १४, २०७६ मध्य नेपाल संवाददाता